free forum | ndebanye aha maka free forum | Top 20 forums | nkwado | akara
Best Nchịkọta akụkọ site na 2004
Oge mbuji 0.1 sekọnd
PhpBB XTE 4.3 kachasị ike
Njikọ CDN (Cloudflare)
Esere nke aka nke onwe, oge mpịakọta dị mkpụmkpụ
ọzọ ...Nkwụsị na-aga n'ihu
Nwepụta onwe ya iji Style Admin
Asụsụ 104 onye ọrụ dị
Igwe dị ala
Ọganihu mgbe nile (2022)
Enweghị ego, oke, ma ọ bụ mgbasa ozi
Na-anabatakwa maka smartphones
Subdomain ma ọ bụ n'elu-larịị ngalaba
Achọpụtara maka engines ọchụchọ
Avatars, ọkwa, ogo data profaịlụ
Akwụkwọ maka ọkwa ọhụrụ
Nkọwapụta ederede akpaaka
Ozi nzuzo na nkata ndụ
Bookmark na posts ikpeazụ
Ntọala maka ọrụ na otu
Ederede nwere ọtụtụ nhọrọ
Ndekọ njirimara na ọnụ ọgụgụ
Kewapụ ma jikọta posts
Ikikere na ịnweta akara
Cockpits maka njedebe & nchịkwa
Nbanye site na Facebook ga-ekwe omume
Nzaghachi Ngwa na Quotes
Na-akwado ozi (Skype, Facebook)
Ịdọ aka ná ntị na mkpọchi
Nkwuputala na imechi
Ozi-eju na ozi ọma
Kanye akara azịza nye ajụjụ
# Hashtag nkwado na posts
Njikwa faịlụ na echiche bipụta
Gosipụta isiokwu ndị yiri ya
Nchọta ederede zuru oke na ọchụchọ di elu
Post preview, smilies, signatures
Nnọkọ pụrụ iche karịa nke Facebook!
Gbado anya na isiokwu kama na -eche ndị mmadụ
Enweghị nnyocha na ezigbo aha
Enwere ike ịchọta ya site na engines ọchụchọ
Onyinye nwere uru dị ogologo
Ọnọdụ nke data bụ Austria
Ọ dịghị isiokwu chaos ma ọ bụ ederede ederede
Enweghị ire ahịa onye ọrụ
Mepụta otu ọnụego free
Họrọ aha akaụntụ (subdomain gị) ma tinye adreesị ozi-e gị. Rịba ama na a ga-ezitere paswọọdụ nchịkwa isi gị na adreesị ozi-e gị. Ị gaghị enweta ozi ịntanetị ma ọ bụ mgbasa ozi si n'aka anyị. Ka o sina dị, ọ nwere ike ime na e-mail na paswọọdụ nchịkwa isi gị na-abata na folda spam gị.
Ngwá ọrụ anyị na-akpaghị aka ga-emepụta ohere free gị na sekọnd. Ị nwere ike ịnweta ya ngwa ngwa ma jikwaa ihe niile. Zọpụta onwe gị ọtụtụ isi ọwụwa na ego site na a free forum kama nke gị onwe gị nwụnye na gị na ihe nkesa! I kwesịghị ichegbu onwe gị gbasara mwakpo spam, mmelite ngwanrọ, nnweta, ụgwọ okporo ụzọ, mmemme ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Lekwasị anya na obodo gị ma anyị ga-eme ndị ọzọ! Nche nke data gị dị anyị mkpa. Ọ bụ ya mere ndị ọrụ anyị ji dị n'Austria ma na-agbaso usoro iwu nchekwa. N'ihi obodo anyị pụrụ iche, ọnụ ọgụgụ gị ga-eleta ọtụtụ puku ndị mmadụ ozugbo ọ bịanyechara aha. Mkpokọta gị dị njikere ịmalite ozugbo ị nbanye na mfe ịhazi ya.
Aha Akaụntụ [A-z na 0-9]: .webboard.org
Adreesị ozi-e [megharịa]:
Tinye AntiBot [ ]:
Site na ihe okike ị nabatara Usoro ojiji.
Aha Akaụntụ [A-z na 0-9]: Adreesị ozi-e: Adreesị ozi-e [megharịa]: Tinye AntiBot [ ]:
Ngwá ọrụ anyị na-akpaghị aka ga-emepụta ohere free gị na sekọnd. Ị nwere ike ịnweta ya ngwa ngwa ma jikwaa ihe niile. Zọpụta onwe gị ọtụtụ isi ọwụwa na ego site na a free forum kama nke gị onwe gị nwụnye na gị na ihe nkesa! I kwesịghị ichegbu onwe gị gbasara mwakpo spam, mmelite ngwanrọ, nnweta, ụgwọ okporo ụzọ, mmemme ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Lekwasị anya na obodo gị ma anyị ga-eme ndị ọzọ! Nche nke data gị dị anyị mkpa. Ọ bụ ya mere ndị ọrụ anyị ji dị n'Austria ma na-agbaso usoro iwu nchekwa. N'ihi obodo anyị pụrụ iche, ọnụ ọgụgụ gị ga-eleta ọtụtụ puku ndị mmadụ ozugbo ọ bịanyechara aha. Mkpokọta gị dị njikere ịmalite ozugbo ị nbanye na mfe ịhazi ya. Usoro nke iji site na akara ahụ tinye.
Nkwụsị na-aga n'ihu